Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store
Androany isika dia hanome famerenana indray ireo tolotra tsy hay tohaina izay matetika hitantsika ao amin'ny App Store, izay misy safidy Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana ho an'ny iPhone sy iPad izay aloa matetika.
Manoro hevitra anao aho hanararaotra ny fotoana ary hisintona azy rehetra haingana araka izay tratra; avy eo ianao dia hanana fotoana hahafantarana raha mila azy ireo ianao na tsia, raha tianao izy ireo na tsia, ny zava-dehibe dia ny manararaotra ilay tolotra. Tsarovy izany Maimaimpoana ireo fampiharana sy lalao ireo ankehitriny, saingy tsy fantatsika hoe haharitra hafiriana izy ireo, koa maika fa mifalia.
1 Ampio ny horonantsary - manafaka ny habaka
2 Backseat Driver International - Wikipedia sy Wikivoyage Toerana mahaliana
3 GoodCounter - Counter Tally tsara tarehy tsara tarehy
4 Kintana marokoroko
5 WorkBreaker - Timer Pomodoro natao kanto miaraka amin'ny Widget Ankehitriny
6 Musikk - Streaming mozika maimaim-poana ho an'ny SoundCloud
7 Very tao Harmony
8 Ankizy Minis miloko
Ampio ny horonantsary - manafaka ny habaka
Ampio ny horonantsary - manafaka ny habaka dia fampiharana izay hanery ny horonan-tsary amin'ny iPhone na iPad anao hahafahana manafaka toerana bebe kokoa amin'ny fitaovanao. Ho fanampin'izany, azonao atao ny manao famatrarana andiany sy ny filazany fa ny fitazonana ny kalitao tany am-boalohany.
Raha vantany vao voafintina ireo horonantsary, dia voatahiry ao anaty fampirimana ao amin'ilay fampiharana izy ireo, fa azonao atao ihany koa ny manondrana azy ireo amin'ny fampiharana Photos amin'ny tanana.
Ny vidiny mahazatra dia € 2,99 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana.
Backseat Driver International - Wikipedia sy Wikivoyage Toerana mahaliana
Efa mba nanontany tena ve ianao fa mandeha haingana amin'ny lamasinina, amin'ny bus, amin'ny fiara na amin'ny kamio? Sa manontany tena ianao hoe ho aiza ny halavanao eo am-pidinana amin'ny lalana tendrombohitra? amin'ny Mpamily any ambadika afaka mahita haingana ianao ary mahalala toerana hitsidihana azy amin'ny ho avy.
Ny vidiny mahazatra dia € 0,99 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana.
GoodCounter - Counter Tally tsara tarehy tsara tarehy
Con GoodCounter afaka ianao lazao amin'ny fomba tena tsotra izay rehetra eritreretinao: may ny kaloria, nandeha lavitra, namaky boky, fiara mavo canary hitanao ...
GoodCounter - Counter Tally tsara tarehy tsara tarehy€ 1,09
Kintana marokoroko dia mampiala voly lalao ady an-habakabaka ho an'ny iPhone sy iPad. Azonao atao ve ny mijanona velona lava mba ho tafavoaka velona amin'ny rafitra piraty ary ho lasa Ace ao amin'ny Rogue Star?
WorkBreaker - Timer Pomodoro natao kanto miaraka amin'ny Widget Ankehitriny
WorkBreaker dia tsotra, fa mpanamory fotoana tsara tarehy izay hanampy anao hamokatra bebe kokoa. Ny tena mampiavaka azy dia:
Miorina mora foana ny timer ho an'ny fotoam-piasana, ny fiatoana ary ny fiatoana maharitra miaraka amin'ny fanaraha-maso mora ampiasaina sy mora ampiasaina
Mahazoa fampandrenesana amin'ny valin'ny feo manodidina
Ny Widget anio dia manampy anao hiditra haingana amin'ny fampahalalana rehetra manan-danja na aiza na aiza
Tena azo namboarina: napetraka tsirairay ny faharetan'ny fotoam-pivoriana, fiatoana ary fiatoana maharitra
Manapaha hevitra momba ny isan'ny fotoam-piasana tianao hiatoana kely
Ny WorkBreaker dia mety indrindra amin'ny "fomba pomodoro" sy fomba hafa mitovy amin'izany "fomba 52-17" na "fomba 90 minitra".
Musikk - Streaming mozika maimaim-poana ho an'ny SoundCloud
Raha mpampiasa SounCloud mahazatra ianao, Muzikk dia a mpilalao tsotra sy tsotra, izay mamela ny mpampiasa hifantoka amin'ny mozika, ary tsy misy zavatra hafa. "Muzikk no hany mpilalao mozika manolotra fidirana manokana mankany Soundcloud tsy misy vidiny ary tsy misy doka."
Ny vidiny mahazatra dia € 4,99 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana.
Very tao Harmony
Lalao izany mpihazakazaka mozika izay ahafahanao miaina tantara roa tsy mampino:
Famindra toerana MIRAI
Niaraka tamin'ny MIRAI tamin'ny diany namakivaky an'izao rehetra izao
Mamela anao handositra ny anjaranao
Jereo ny mozika mahafinaritra an'ny mpamoron-kira japoney malaza
Ny zava-niainan'i Kaito
Hiaina ny tantara.
Nanomboka tamin'ny dia mahafinaritra izy mba hamonjy an'i Kaito Aya.
Ny vidiny mahazatra dia € 3,99 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana.
Very tao Harmonymaimaim-poana
Ankizy Minis miloko
Ankizy ColorMinis Izany dia fampiharana tsotra ho an'ny ankizy kely ao an-trano hankafizany sary sy fandokoana. "Izy io dia toy ny boky fandokoana 3D fa manana endrika tena misy izy fa tsy taratasy." Ary raha mahatsapa nostalgia ianao, dia afaka mandoko miloko ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao 8 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store
Ny Camera + dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanana ny iPhone 7 Plus ary mamela ny fisamborana RAW
Ny fanovana ny baterian'ny AirPods dia mitentina 49 euro